भारतले न्युजिल्यान्डसँग हार्नुका ३ कारण | Hamro Khelkud
भारतले न्युजिल्यान्डसँग हार्नुका ३ कारण
एजेन्सी – उपाधिको प्रमुख बलियो दाबेदार मानिएको भारत न्युजिल्यान्डसँग अप्रत्यासित हार बेहोर्दै एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप २०१९ को सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ ।
बुधबार सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्डसँग अविश्वसनिय १८ रनको हारसँगै यस विश्वकपमा भारतको यात्रा समाप्त भएको हो । मंगलबारबाट सुरु भएको खेल बर्षाको कारण बुधबार सकिन पुग्यो । मंगलबार म्यानचेस्टरमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको न्युजिल्यान्डले ४६.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदा २ सय ११ रन बनाएको अवस्थामा निरन्तर बर्षाको कारण खेल बुधबारको लागि सरेको थियो । त्यहि स्थितीबाट सुरु गरेको न्युजिल्यान्डले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २ सय ३९ रन बनायो ।
२ सय ४० रनको मध्यम विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले अन्तिम ओभरमा अलआउट हुनुअघि २ सय २१ रनमात्रै बनाउन सक्यो । बलिङमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेको भारतका लागि रविन्द्र जडेजाले ५९ बलमा समान ४ चौका र छक्का सहित ७७ रनको योगदान दिएपनि जितको लागि पर्याप्त भएन । उत्कृष्ट प्रर्दशनका बाबजुद पनि भारत न्युजिल्यान्डसँग हार्दै सेमिफाइलनबाट बाहिरिनुका प्रमुख तीन कारण यस प्रकार छन् :
३. मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानको खराब सट
मध्यम लक्ष्य पछ्याएको भारतले शीर्षक्रमका विराट कोहली, रोहित शर्मा र केएल राहुललाई समान १ रनमा गुमाएको थियो । प्रमुख ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट हुँदा भारतको जितको लागि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले जिम्मेवारीका साथ ठूलो इनिङ खेल्नु पर्ने दबाब बढेको थियो । ठूलो आसा गरिएका दिनेश कार्तिक १० औं ओभरको अन्तिम बलमा जेम्श निशमले उत्कृष्ट क्याच गरेपछि ६ रनमा पेभिलिएन फर्के । कार्तिक आउट भएसँगै दबाब र ठूलो जिम्मेवारी हार्दिक पान्ड्या र ऋषभ पन्तमाथि थपिएको थियो ।
तर मिचेल सान्टनरको २३ ओभरको पाँचौ बलमा ठूलो सर्ट खेल्ने धुनमा पन्त बाउन्ड्री लाइन नजिकै कोलिन डी ग्राण्डहोमबाट ३२ रनमा क्याच आउट भए । जुन समय भारतको लागि त्यो गलत सर्ट आवश्यक थिएन । त्यस्तै ३१ ओभरको तेस्रो बलमा हार्दिक पान्ड्या पनि गलत सर्ट खेल्दै कप्तान केन विलियमसनबाट क्याच आउट हुन पुगे । उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका जडेजाले ७७ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेपनि अन्त्यमा गलत सर्ट खेल्दै क्याच आउट भएपछि भारतको हार पक्का बनेको थियो । दबाबमा गैरजिम्मेवार सर्ट खेनु भारतको हारको एक कारण हो ।
२. शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानको खराब प्रर्दशन
भारतले यस लक्ष्य सहजै पुरा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको लागि शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानले राम्रो सुरुवात दिन आवश्यक थियो । तर शीर्षक्रममा चार ब्याट्सम्यान विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल र दिनेश कार्तिक कुल ९ रन मात्रै बनाउन सके । जसको ठूलो दबाब मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याट्सम्यानलाई पर्न पुग्यो ।
रोहित शर्मा दोस्रो ओभरको तेस्रो बलमा विकेटकीपर टम लेथमबाट १ रनमा क्याच आउट भए । कप्तान विराट पनि तेस्रो ओभरको चौथो बलमा १ रनमा एलवीडब्लू आउट भए । त्यस्तै अर्का ओपन केएल राहुल चौथो ओभरको पहिलो बलमा १ रनमा पेभिलिएन फर्किए । ठूलो आसा गरिएका दिनेश कात्तिक १० ओभरको अन्तिम बलमा ६ रनमा क्याच आउट भएपछि भारतको जित टाढिएको थियो ।
पछिल्लो तीन वर्ष यताको नतिजा हेर्दा पनि भारतको अधिकांश जित शीर्षक्रमका तीन ब्याट्सम्यानमा निर्भर छ । शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान नचलेको खण्डमा भारत पराजित हुँदै आएको छ । आज पनि भारतको लागि त्यहि समस्या घातक बन्यो ।
१. हेनरी र बोल्टको उत्कृष्ट प्रर्दशन
भारतलाई मध्यम योगफलमा रोक्दै न्युजिल्यान्डलाई फाइनलमा पुर्याउन तीव्र गतिका बलर म्याट हेनरी र ट्रेन्ट बोल्टको प्रर्दशन निर्णायक रह्यो । यी दुई बलरले पहिलो पावर प्लेमा ४ विकेट लिएपछि न्युजिल्यान्ड मध्यम लक्ष्यमा पनि भारतमाथि पूर्णरुपमा हाबी बनेको थियो ।
हेनरीले रोहितलाई दोस्रो ओभरको तेस्रो बलमा कट विहाइन्ड निकाल्दै विकेटकीपर लेथमबाट १ रनमा क्याच आउट गराए । अर्का तीव्र गतिका बलर बोल्टले तेस्रो ओभरको चौथो बलमा कप्तान विराट कोहलीलाई १ रनमा एलवी डब्लू आउट गरे । विराटको विकेटपछि न्युजिल्यान्ड खेलमा पूर्णरुपमा हाबी बनेको थियो ।
हेनरीले चौथो ओभरको पहिलो बलमै राहुललाई १ रनमा क्याच आउट गराए । दशौं ओभरको अन्तिम बलमा हेनरीले दिनेश कात्तिकलाई ६ रनमा क्याच गराए पछि भारतको जित टाढिएको थियो । सुरुवाती चार विकेट गुम्दा मध्यक्रममा पूर्ण रुपमा दबाबमा परेको भारतका लागि रविन्द्र जडेजाले आक्रमक ब्याटिङ गर्दै जितको संभावना देखाएका थिए । तर बोल्टले ४८ ओभरको पाँचौं बलमा क्याच आउट गराएपछि न्युजिल्यान्डको जित पक्का बनेको थियो ।
सम्रगमा हेनरीले १० ओभरमा ३७ रन खर्चेर ३ महतवपूर्ण विकेट लिए । त्यस्तै बोल्टले पनि १० ओभरमा ४२ रन खर्चिदै दुई निर्णायक विकेट लिए ।